Lingo Play: Fitaovana fianarana teny -Mianara fiteny vahiny maimaim-poana eto amin'ny tranokala -
Mianara teny vahiny haingana ary mahomby amin’ny fotoana izay itiavanao azy.
Mitatadia fiteny sy voambolana miaraka amin’ny mpialalao manerana izao tontolo izao
Ampiharo ary mahazoa taratasy manamarina an’ireo rehetra fiteny misy ato
Mianara fiteny vahiny miaraka amin'ny Lingo Play
Fiteny inona no tianao hianarana?
Anglisy (Amerikanina and Britanika), Allemanina, Frantsay, Spanish, Italianina, Portuguese (Portuguese and Brazil), Korean, SInoa, Japanese, Vietnamese, Indonesian, Thai, Hindi, Hebrew, Norwegian, Polish, Czech, Slovak, Swedish, Finnish, Dutch, Danish, Hungarian,Greek, Romanianina, Turkish, Rosianina, Arabo
Mianara fiteny vahiny eto amin'ny tranokala
Milalao sa mianatra no tianao?
Ho hitanao ahoana no mianatra fiteny vahiny haingana ary mora na mitadidy ireo fiteny na voambolana miarka amin’ireo mpialalao manerana izao tontolo izao.
Fitaovana fianarana fiteny Lingo Play Lesona fampidirana ary samihafa dia voavolavola ho an’ireo mpianatra izao mbola vao manomboka sy ho an’ireo efa alavidavitra. Ianao dia hahita arivo fiteny sy voambolana izay ho mora sy ho tsara tadidinao.
Mianara , milalaova ary ampiharo ireo fiteny vahiny miaraka amin’ny Lingo Play.
Lingo Play Fanampiny
Milalaova eto amin'ny tranokala
Hàsao ny namanao ary miara-milalao no sady mianatra ireo fiteny vahiny .
Ampio ireo voambolanao
Naoty sy loka
Mandraisa amin’ny fifaninànana ary mahazoa loka
Ho hitanao ireo arivo voambolana sy fitenin’ireo fiteny vahiny.
Mifaninàna miaraka amin’ireo mpilalao manerana izao tontolo izao
Mahazoa taratasy fanamarinana
Vitao ny fianaranao eto amin’ny Lingo ary mahazoa taratasy fanamarinana ho an’izay fiteny vahiny nianaranao.
Azo alaina ao amin'ny Apple Store sy Google Play
Hianaro ireo fiteny miaraka amin’ny Lingo Play. Andramo dieny zao!
Mianara fiteny vahiny haingana ary mahomby!
Ny karatra fianarana dia lalana mahomby amin’ny fianarana fiteny haingana ary koa amin’ny fitadidiana voambolana.
Hahita arivo voambolana ianao ary manampy ireo voambolana efa hainao
Mianara teny sy karazan’teny manampy anao hiteny mazava tsara amin’ny vava.
Mandalova fitsapàna mba hahazoana taratasy fanammarinana
Midira eto amin'ny fiara-monin'i Lingo
Alaivo ilay fitaovana amin'ny tranokala
Alaivo ilay fitaovana fianarana fiteny Lingo Play dia azo alaina ho an’ny finday sy tableta ao amin’ny Apple Store sy Google Play”}” Download language learning app Lingo Play which is available for smartphones and tablets in Apple Store and Google Play
Midira amin'ny kaontinao
Midira amin’ny kaotinao mba hifandraisan’ireo tahirin-kevitra ao anaty solosaina ary mitadidy ireo lalana efa nandalovanao ao anatin’ny Servera an’i Lingo.
Zarao amin'ny namanao!
Efa an tapitra no efa nampiasa an’i Lingo, no sady nilalao sy nianatra niaraka tamin’ireo namana. Hasao ny namanao mba hiditra ato!
Alaivo Lingo Play App dieny zao!
Lingo Play dia fitaovana mahaliana sy mahomby amin’ny fianarana fiteny vahiny sy fitadidiana ireo fiteny amin’ny teny Anglisy Frantsay Allemanina Español Português Italianina 日本語 中文 Korean Русский العربية Türkçe.
Tadiavo ny teninao na izay tianao hianarana!